साेनिकासँग काे गाेप्य च्याट बाहिरिए पछि पारसले यसाे भने …. – Hamrosandesh.com
साेनिकासँग काे गाेप्य च्याट बाहिरिए पछि पारसले यसाे भने ….
पूर्व युवराज पारस शाह विभिन्न हत्कण्डाका कारण चर्चामा आउने गरेका छन् ।
सोनिकाले अङ्ग्रेजीमा सोध्छिन् – ‘किन यति धेरै समाचाररु हिमानीसँग डिभोर्स हुन लागेको हो?’
पारसले धर्मका कारणले हिमानीसँग डिभोर्स गर्न नमिलेको बताउँछन् । उनले सोनिकालाई फोनमा कुरा गर्न आग्रह समेत गर्छन् ।
‘आज बिहानै मेरो बुबासँग झगडा पर्‍यो, उनीहरुलाई मैले तपाईंसँग बिहे गर्दैछु भन्ने लाग्छ, बुबालाई तपाईं र हिमानीका कारण म समस्यामा छु भन्ने लाग्छ ।’